MB ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဧပြီလ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB 2016 ဧပြီလ
Gegen Ende seines Evangeliums sind diese faszinierenden Kommentare des Apostels Johannes zu lesen: «Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch [...] Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären» (Johannes 20,30; 21,25) ဤမှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ခရစ်ဝင်ကျမ်း လေးစောင်ကြား ခြားနားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချက်များသည် ယေရှု၏အသက်တာ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ခြေရာများအဖြစ် ရေးထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ရှင်ယောဟန်က သူ၏ရေးသားချက်များမှာ "ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ယုံကြည်၍ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ အသက်ကိုရစေခြင်းငှာ ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းငှာ" (ယော၊ ၂၀း၃၁)။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ၏ အဓိကအာရုံမှာ ကယ်တင်ရှင်အကြောင်း သတင်းကောင်း ကြေငြာရန်နှင့် ကိုယ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသနားသော ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယေရှုမွေးဖွားခြင်းသည်သာမန်လူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်အတူလူသားအားလုံးသည်အာဒံမှမွေးဖွားလာသည့်နည်းတူလူသားတစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိလာသည်။ သူသည်ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သော်လည်းဘုရားသခင်၏ထာဝရသားတော်သည်အစမှအဆုံး၊ မွေးဖွားခြင်းအထိသေခြင်းတိုင်အောင်လူ့အသက်ကိုလုံးလုံးသိမ်းယူခဲ့သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေနှင့်ကိုယ်တော်သည်လုံးလုံးလျားလျားဘုရားသခင်ဖြစ်ကာလုံးလုံးလူသားဖြစ်သည်။ ဤလွှမ်းမိုးသောကြေငြာချက်တွင်ထာဝရတန်ဖိုးထားခြင်းကိုခံထိုက်သောထာဝရအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
သူ၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းနှင့်အတူ၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ထာဝရကာလမှထွက်ခွါလာပြီး၊ အသွေးအသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် အချိန်နှင့်အာကာသဖြင့် အုပ်စိုးထားသည့် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ “ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိခံယူ၍ ငါတို့တွင်တည်သည်ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်နှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသော ခမည်းတော်၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်အဖြစ် ဘုန်းအသရေတော်ကို ငါတို့မြင်ရသည်” (ယောဟန်၊ 1,14).
ယေရှုသည်လူသားအားလုံးအတွက်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်လုံးလုံးလျားလျား - ခမည်းတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တူသည်။ သူ၏မွေးဖွားခြင်းသည်ပရောဖက်ပြုချက်များစွာကိုပြည့်စုံစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကတိတော်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
သခင်ယေရှု၏ဘ ၀ နှင့်လုပ်ဆောင်မှုသည်မတူကွဲပြားသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ God-Man ယေရှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှင့်လူစပ်ကြားကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်လူ့သဘောသဘာဝတွင်ပါ ၀ င်ပြီးအပြစ်ကင်းသောအသက်တာဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်လူသားများကိုတရားမျှတမှုရရှိစေခဲ့သည်။ ဤအချက်ကသူသည်ဘုရားသခင်နှင့်လည်းကောင်း၊ လူတို့နှင့်လည်းကောင်းဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့မွေးမြူနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုနားလည်စေသည်။ ခရစ်စမတ်တွင်သူမွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်းသူ၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံး၏ဖြစ်ရပ်များသည်သန့်ရှင်းသောအပတ်အတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုံးစုံလွှမ်းခြုံသောချီးမွမ်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သူ၏အသက်တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီဘုရားသခင်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စုံလင်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုဆောင်ခဲ့သည်။
သခင်ယေရှု၏သေခြင်း၏ကံကြမ္မာကို ရည်ညွှန်း၍ ခမည်းတော်နှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းတွင် ပေးအပ်ထားသည့် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးတော်ကို သက်သေခံရန် ဣသရေလ၏ယဇ်ပူဇော်မှုများသည် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ငါတို့သခင်သည် အသေခံတော်မူသဖြင့် စာတန်ကို အနိုင်ယူ၍ သေခြင်းမှ အုပ်စိုးတော်မူသည်– “ယခုအခါ သားသမီးတို့သည် အသွေးအသားရှိသောကြောင့် အညီအမျှ လက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သေခြင်း၌ အုပ်စိုးသော သူထံမှ တန်ခိုးကို ခံရမည်အကြောင်း၊ အတိအကျပြောရရင်၊ သေခြင်းတရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကို မာရ်နတ်ဆီ ရွေးနုတ်ခဲ့တယ်။” (ဟေဗြဲ၊ 2,14-15). Paulus fügte dem hinzu, dass Jesus «herrschen [muss], bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füsse legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod» (1. ကောရိန္သု ၁5,25စာ-၂၆)။ ယေရှု၏အသေခံခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏ အပြစ်ဖြေခြင်းအသွင်အပြင်ကို ထင်ရှားစေသည်။
အီစတာတနင်္ဂနွေတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များစွာ ပြည့်စုံသည့် ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ဆင်နွှဲကြသည်။ ဟေဗြဲစာရေးဆရာက ဣဇာက်၏သေခြင်းမှ ကယ်တင်ခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ထင်ဟပ်စေသည် (ဟေဗြဲ၊ 11,18စာ-၁၉)။ ငါးကြီးတစ်ကောင်၏ “သုံးရက်သုံးည” ရှိကြောင်း ယောနကျမ်းမှ သင်ယူခဲ့သည် (ယော ၂း၁)။ ယေရှုသည် သူ၏သေဆုံးခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်ကို ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။2,39-40); မဿဲ ၁6,4 နှင့် 21; ယော 2,18-22) ။
Wir feiern Jesu Auferstehung mit grosser Freude, weil sie uns in Erinnerung ruft, der Tod ist nicht endgültig. Vielmehr stellt er einen Zwischenschritt auf unserem Weg in die Zukunft dar -das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. Zu Ostern feiern wir Jesu Sieg über den Tod und das neue Leben, das wir in ihm haben werden. Voller Freude sehen wir der Zeit entgegen, von der in der Offenbarung 21,4 မိန့်ခွန်းမှာ “[...] ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်လုံးများမှ မျက်ရည်အားလုံးကို သုတ်တော်မူမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တဖန် သေခြင်းလည်းမရှိ၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပထမ ဆုံးသွားပြီ။" ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ယေရှုဖွားမြင်ခြင်းကသူ့ဘဝနှင့်သူ့ဘဝကိုသေခြင်း၌ဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သူ၏သေခြင်းကိုသူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှ ခွဲခြား၍ မရပါ။ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသူတက်ကြွခြင်းနှင့်ခွဲခြား။ မရပါ။ သူသည်လူ့ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီနေထိုင်ရန်သင်္ချိုင်းဂူမှထွက်မလာခဲ့ပါ။ သူသည်လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောခမည်းတော်ထံသို့တက်ကြွတော်မူပြီး၊
In der Einleitung zu Torrances‘ Buch Atonement schrieb Robert Walker: «Mit der Auferstehung nimmt Jesus unsere Wesenheit als Mensch in sich auf und führt sie der Gegenwart Gottes in Einheit und Gemeinschaft der trinitarischen Liebe zu.» C.S. Lewis drückte es so aus: «In der Christengeschichte steigt Gott hinab, um dann wieder aufzufahren.» Die wunderbare gute Botschaft kündet davon, dass Jesus uns mit sich emporhob. «[...] und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus» (Epheser 2,6-7) ။
လူ့ဇာတိခံခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တက်ကြွခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤမှတ်တိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘ ၀ နှင့်လုပ်ငန်းခွင်၌ယေရှုလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သမျှကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသူသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူလုပ်ဆောင်ပေးသောအရာများကိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါစို့။ သူကရွေးနုတ်ခြင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုဆိုလိုတာပါ။